The 20 best pets services 2019 ― DoneMaster မွနျမာ
Find the best pets service
Baho Vet Clinic
Baho တရိစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းမှ 2019 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 1ရက်နေ့မှစ၍ပြီးပြည့်စုံသော one stop service ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ အထွေထွေရောဂါကုသခြင်းများ ၊ X-ray ရိုက်ခြင်း၊ Ultrasound ရိုက်ခြင်း ၊ အရေပြားစစ်ဆေးခြင်း၊ခွဲစိတ်ကုသခြင်းစသော ဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံကိုစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှအထူးကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးမှာဖြစ်ပြီး အတွေ့အကြုံရင့် ဆရာဝန်များအဖွဲ့ကို ထိုင်းဆရာဝန်မှကိုယ်တိုင်ကြီးမှူးကြီးကြပ်၍မိသားစုဝင်သဖွယ် နွေးထွေးပျူ
Cherry Valley Pet Clinic - Yangon (Facebook)
တိရိစ္ဆာန် ဆေးကုခန်း ဖြစ်ပါတယ် အိမ်တိုင်ရာရောက် ဆေးလိုက်ကုပေသော ဝန်ဆောင်မှူရှိပါသည်။ သင်စိတ်ဝင်စားမှူကို အထူကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Fluffy Tail Grooming & Spa
သင့် ကလေးအတွက် ရေချိုးပေးဖို့ (သန့်ရှင်းရေး)လုပ်ပေးဖို့ ခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင် Fluffy Tail Grooming
Spa ကိုသာ ဖုန်းတစ်ချက်ဆက်လိုက်ပါ.. ညီမတို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်ရှင့် 😊😊🐶🐱🐰
Forever Blessing Pet Grooming Spa and Accessories
Forever Blessing Pet Grooming Spa and Accessories ဆိုင် တွင်
ခြေ လက် နားရွက် သန့်ရှင်းရေး
မွှား သန်း သန့်ရှင်းရေး
Package လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တမျိုးချင်းစီပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်တိုင်းကျပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Full Grooming / Basic Grooming / Bath သီးသန့်တွေအတွက် 10% Discount ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Happy Pets Grooming Spa & Pet Accessories
အိမ်မှာမွေးထားတဲ့သားသားမီးမီးလေးတွေ ကျန်းမာပြီး လှပသန့်ရှင်းနေစေဖို့အတွက် ဝန်ဆောင်မှု အကောင်းဆုံးကိုရရှိနိုင်မယ့် 🐕 Happy Pets Grooming Spa & Pet Accessories 🐈 ဆိုင်လေးကို အမှတ် (၂၅)၊ အာသောကလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေမြို့နယ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်နော်....
🐕 Happy Pets 🐈 ရဲ့ Spa ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့....
🐶 အမွှေးများ သန့်ရှင်းပေးခြင်း။
🐶 ခြေသည်း လက်သည်းညှပ်ပေးခြင်း။
🐶 ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရ ရေချိုးလို့မရတဲ့ ကလေးတွေအတွက် Dry Powder ဖြင့် အခြောက်လျှော်ခြင်း တို့အပြင်။
🐶 ရေအေးမကြိုက်တဲ့ ကလေးတွေအတွက်
Kiss Pet Spa & Pet Hotel
အမွှေး လှလှလေး #ပုံသွင်း ညှပ်ပေးခြင်း
Premium #Shampoo အမျိုးမျိုးဖြင့်ရေချိုးပေးခြင်း
ထုံးနေသော #အမွှေးများ ရှင်းပေးခြင်း
နားသန့် #မျက်လုံး သန့်ရှင်းပေးခြင်း
ရေမွှေး #Lotion အပါ Complete Package တွေရပါပီ
အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မူတွေကို အသင့်တင့်ဆုံးနှုန်းထားနဲ့ တိချစ်သူများကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ
ဖီဖီ/မီမီတို့ ခရီးသွားတဲ့အချိန်/မအားလပ်တဲ့အချိန်တွေ #Kiss Pet Hotel ရဲ့
24 hr Air_Con အခန်းကျယ်ထဲမှာ
ကလေးတို့ ခြံလေးတွေကိုယ်စီနဲ့ ထားပေးမှာနော်
ဖီဖီ မီမီနှင့်မခြား စောင့်ရှောက်ပေးမှာဆိုတော့ ကဲဘာလိုသေးလဲ
ကလေးတို့ စားနေကျ အစားသောက်ရယ်
MaHar Swe Pet Shop
ခွေးကြောင်းများ၏ကျန်းမာရေးအကြောင်း ၂၄ နာရီဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ခြင်း
Mandalay Pet Shop, Hotel & Spa
👉🏻👉🏻 မွှား၊ သန်း များနေသော ကလေးများအတွက် မွှား၊ သန်းပြောက် ဆေးဖြင့် ချိုးပေးနိုင်ခြင်း..
👉🏻👉🏻 ယားယံ၍ အရေပြားရောဂါရှိနေသောကလေးများအား အရေပြားယားယံပြောက်ဆေးဖြင့် ချိုးပေးနိုင်ခြင်း..
👉🏻👉🏻 အမွှေးလှစေရန် အမွှေးလှဆေးဖြင့် ချိုးပေးနိုင်ခြင်း..
👉🏻👉🏻 အဖြူရောင်ကလေးများ အရောင်များစွန်းထင်းနေပါက အစွန်းပြောက်ဆေးဖြင့် ချိုးပေးနိုင်ခြင်း..
👉🏻👉🏻 အရေပြားဆဲလ်များ အတွက် အားပြန်ဖြည့်ပေးသော၊ အမွှေးကျွတ်သက်သာစေနိုင်သော ဆေးဖြင့် ချိုးပေးနိုင်ခြင်း..
👉🏻👉🏻 ကြောင်လေးများအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားသော ဆပ်ပြာဖြင့် ချိုးပေးနိုင်ခြင်း..
👉🏻👉🏻 Puppy အငယ်လေးများအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားသော puppies special ဖြင့်
Oh My Dog Exclusive Pet Grooming Salon
Oh My Dog Exclusive Pet Grooming Salon ရဲ့ နောက်ထပ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Exclusive Pick Up Service ကိုမိတ်ဆက်ပေးထားတာ မကြာသေးပါဘူး၊ အခုလည်း Pick Up Service ကိုဖုန်းဆက်ပြီး ယူတဲ့အခါ ဘယ်မြို့နယ်မှာ Delivery Fee ဘယ်လောက် ကျသင့်မယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Exclusive Pick Up Service ကိုယူတဲ့အခါ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်တွေကတော့ .....
OMD! ရဲ့ Facebook Page ကဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပါ။
မိမိကလေးအတွက် ယူမယ့်ဝန်ဆောင်မှုကို အသေးစိတ်
လာရောက် Pick Up လုပ်ပေးရမယ့် အိမ်လိပ်စာ၊ လမ်းအတိအကျ
နဲ့ မြို့နယ်တို့ကို အသေးစိတ် ပြောပြပေးပါ။
ဒါတွေအားလုံး ပြီးသွားရင်တော့ OMD! ရဲ့
Paradise Villa Pet Hotel
တိရစ္ဆာန် ဆေးခန်း အစရှိ၍မျာကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Puppy Island Grooming & Dog Spa
Puppy Luv Pet Grooming Spa
မင်္ဂလာပါရှင့် Puppy Luv မှကြိုဆိုပါတယ်
Puppy Luv Pet Spa and Pet Hotel မှ
လူကြီးမင်းတို့အချစ်တော် ခွေးလေး ၊ ကြောင်လေး တွေကို
🐶 အခြောက်လျှော်ပေးခြင်း ။
🐶 ရေချိုးပေးခြင်း ။
🐶 အမွှေးအလှညှပ်ပေးခြင်း ။
🐶 အမွှေးရှင်းပေးခြင်း ။
🐶 နားသန့်၊ မျက်လုံးသန့်ပေးခြင်း ။
🐶 သွားတိုက်ပေးခြင်း ။
🐶 ခြေဖဝါးအသားမာဖျောက်ပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီနော်
သန်းရှိတဲ့ ကလေးလေး၊ယားနာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေအတွက် Shampoo သီးသန့်သုံးပေးပါတယ်ရှင့် ။
ရေပူရေအေး စနစ်လဲ ရှိပါတယ်နော်
🐾 Pet Hotel အတွက် 🐾
Pyay Veterinary Clinic
ပြည် တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းသည် မြန်မာပြည်၏ ဝန်ဆာင်မှူအပြည်အဝပေးသော ဆေးခန်းတခုဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်တော်တို့သည် ၁၉၈၀ ပိုင်းအစထဲမှ ဖွင့်လှစ်ထား တာဖြစ်ပြီး ။ ဒေါက်တာ မောင်မောင် နှင့် ဒေါက်တာခင်ဦးမာ တို့ဦးစီးဖွင့်လစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယုခုဆိုလျှင် ဒေါက်တာအေးအေးကြိုင်မှ ဆက်လက်ကုသမှူများကိုပေးယူနေပါတယ် ပြည်တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းသည် ခွေးနှင့်ကြောင်များကို အဓိကထားရုံတင်မ တခြာသော တခြားသော တိရိစ္ဆာန်အသေးများကိုပါကုသပေးပါသည် ။အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ကုသပေးမှာဖြစ်ပြီး သန့်ရှင့်သပ်ရပ်သော ပတ်ဝန်ကြင်ရှိမှူကြောင့် သင်စိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့် သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို လာရောက်ပြသလို့ရပါသည်။ ဆေးခန်းအတွင်း စစ်ဆေး ပေးရုံတွင်မကဘဲ
Specialist Veterinary Resources Center
Specialist Veterinary Resources Centerမှာ ......
# Poultry farm တွေအတွက် IB, ND ! IBD test
# Cattle farm တွေအတွက် ရက်၃၀ နဲ့ ဇီးရှိမရှိ စမ်းနိုင်တဲ့ Pregnancy Test .
# Pets တွေအတွက် General health နဲ့ Distemper test , Parvo test , 4DX test များ ,
#4in 1 Feline ,5in 1 ,6in 1 vaccine များ ...
# နွေဦးရာသီ ရောက်လာပြီဖြစ်လို့ ဆေးဆပ်ပြာနဲ့ ရေချိုးခြင်း , အမွှေးညှပ်ခြင်း , ခြေသည်း လက်သည်း လှီးဖြတ်ခြင်း ,နားသန့်ရှင်းခြင်း.
# နွေရာသီ အပမ်းဖြေခရီးများထွက်ရာတွင် မိမိတို့၏ pets ကလေးများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အပ်နှံနိုင်ခြင်း..
စတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများ ရနေပါပြီ..,
Su Zin Pet Hotel
The Princess Pet Spa
📣📣📣📣Princess Pet Spa ကို အားပေးကြတဲ့ Customer လူကြီးမင်းများအတွက်အထူးသတင်းကောင်းပါ📣📣📣📣
✔️ယခင်က ပိတ်ထားသော Princess Pet Hotel ကို ပြန်လည်စတင်ဖွင့်လှစ်နေပြီး ဖြစ်ကြောင်း Announcement လုပ်ပါတယ်နော်
✔️သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပီး မိမိတို့ ချစ်ခင်ရတဲ့ ပါပီလေးများကို ခရီးသွားတဲ့အခါ စိတ်ချလက်ချထားခဲ့နိုင်အောင် Princess Pet Hotel မှ စတင်လက်ခံနေပီဖြစ်ပါတယ်နော်
✔️ပါပီလေးများ ကြောင်လေးများအား အကောင်ရေ အကန့်သတ်နဲ့သာ လက်ခံတာ ဖြစ်လို့ ကြိုပီး Booking လုပ်ဖို့တော့ မမေ့နဲ့နော်
🏠လိပ်စာကတော့ အမှတ် ၂၀၁ B မြဝတီလမ်း ( မြင်သာလိုင်စင်ရုံးအနောက်လမ်း) သဃန်းကျွန်း မြို့နယ်ုဖစ်ပါတယ်နော် PS. လိုင်စင်ရုံးဘေး ရတနာလမ်းသွယ်မှဝင်ရန်
VIP Pet Shop & Grooming
VIP Pet Shop & Grooming ကိုလာရောက်အားပေးကြတဲ့ သားသား မီးမီးတို့ အဝေးကြီးက လာရမှဆိုတော့ ဆိုင်ပိတ်ရက်တွေမှာ လာမိနေမှာစိုးလို့ ပိတ်ရက်လေးတွေနဲ့ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်တွေ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ဆိုင်ဖုန်း ၀၉၇၇၈၈၉၉၄၄၄
ကို (ဆိုင်ဖွင့်ချိန်/ပိတ်ချိန်) အတွင်း Booking တင်
Saturday - 10:00 - 7:00pm
Sunday - 1:00pm - 7:00pm
နေပြင်းတဲ့ အချိန်တွေရှိသောကြောင့် အမွှေးညှပ်တဲ့ကလေးတွေများပါသောကြောင့် booking
Wote Pet Grooming
သင့် သားသား/မီးမီး လေးတွေ အတွက် “ WOTE “ Pet Grooming မှ ပေးအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု တွေကို ဘာကြောင့်အသုံးပြုသင့်သလဲ။
သင့်တင့် မျတသောဈေးနှုန်း ကိုသာယြူ့ပီး ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှု ကိုသာပေးအပ်ခြင်း၊
Customer များ စိတ်တိုင်းကျ ပြုလုပ်ချင်သည်များ ကို ပုံဖော်ပေးခြင်း၊
နိုင်ငံတကာအဆင့် ရှိ Pet Groomer များက ဦးစီး သည့်အတွက် သင့်သားသား/ မီးမီး လေးများ၏ အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး အတွက် လွန်စွာစိတ်ချရခြင်း၊
သားသား/ မီးမီး လေးများ၏ Grooming Time တွင် အနံအသက် ကောင်းမွန်သန့် ရှင်းသည့်ဧည့်ခန်းထဲ တွင် Coffee နှင့် Snack လေးတွေကို စားသုံးရင်း အေးဆေးစွာထိုင်စောင့် နိုင်ခြင်း၊
- သားသား/ မီးမီး လေး တွေရဲ့ 
ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန်ဂေဟာ သည် အကျိုးအမြတ် မယူဘဲ လေလွင့်တိရစ္ဆာန်များကို ကယ်ဆယ်ခြင်း နှင့် ဂရုစိုက် ခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်
ညိမ်းချမ်းစေ တိရစ္ဆာန် ဆေးခန်း Nyein Chan Sae Veterinary Clinic
ညိမ်းချမ်းစေတိရစ္ဆာန် ဆေးခန်းဟာ ဆေးကုသပေးရုံတွင်မက
အရေပြားရောဂါအတွက် အထူကုသပေးခြင်း တို့အပြင် အိမ်တိုင်ရာရောက် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှူပေးခြင်း စသည်တို့ကို လူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျဝန်ဆောင်မှူပေနေပါသည်။